एउटा कुखुरामा २७० रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै कुखुरा पालक किसान : RajdhaniDaily.com -
Home अर्थ एउटा कुखुरामा २७० रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै कुखुरा पालक किसान
एउटा कुखुरामा २७० रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै कुखुरा पालक किसान
चितवन । कुखुराको मासु सस्तो हुँदा शहर बजारका उपभोक्ता मख्ख छन् । काठमाडौंका कतिपय मासु पसल सञ्चालकले ब्रोइलर कुखुराको मासु प्रतिकिलो १९० रुपैयाँ भनेर विज्ञापन गरिरहँदा कुखुरा पालक किसान भने मुल्य पाइएन भनेर रोइरहेका छन् ।
अहिले प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नु परेको किसानको भनाई छ । नेपाल ब्रोइलर कुखुरापालक किसान सङ्घका अध्यक्ष झनक पौडेलका अनुसार अहिले किसानले ब्रोइलर कुखुरा प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ हाराहारीमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । जसको लागत मूल्य नै प्रतिकिलो २०५ रहेको उनको भनाइ छ । जबकि एउटा ब्रोइलर कुखुरा बिक्री गर्न योग्य हुँदा दुई देखी तीन किलोको हुने गर्छ । अहिलेको अनुपातमा किसानले एउटा कुखुरा बिक्री गर्दा २७० सम्म घाटा खाने गरेका छन् ।
चितवनमा प्रतिकिलो प्रतिकिलो २०० र काठमाडौँमा २२० देखि १९५ सम्ममा उपभोक्ताले पाउने गरेका छन् । अहिले मुलुकभर एक सयदेखि १० हजारसम्म ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने किसान ४५ हजार हाराहारी छन् । अहिले उत्पादन भएको कुखुराको चल्ला किन्दा किसानले प्रतिगोडा ६५ रुपैयाँ तिरेका थिए । सरदर प्रतिकिलो ३० रुपैयाँको दाना खुवाएको बताउछन् ।
एउटा ब्रोइलर कुखुरा बिक्री गर्न योग्य हुँदा दुई देखी तीन किलोको हुने गर्छ । अहिलेको अनुपातमा किसानले एउटा कुखुरा बिक्री गर्दा २७० सम्म घाटा खाने गरेका छन्
नेपाल दाना, अण्डा, कुखुरा वितरक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जेतनारायण पाण्डेले साना किसान धेरै प्रभावित बनेको धारणा राखे । उत्पादन नै बढी हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । उत्पादन बढी र खपत कम हुँदा दुई किलो भएका कुखुरा खोरबाट उठाउनुपर्नेमा तीन किलो पाँच सय ग्रामसम्मका कुखुरा पनि उठ्न नसकेको उनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय ह्याचरी उद्योगी, विदेशबाट फर्किएका लगायत अन्य व्यवसाय गर्नेहरुले समेत ब्रोइलर कुखुरा पालेका कारण उत्पादन बढेको उनको भनाइ छ । होटल, रेष्टुरेन्ट, विद्यालय, क्याम्पस, बजार पूर्णरुपमा नखुल्दा खपत बढ्न नसकेको पाण्डेको भनाई छ ।
नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले अहिले सातामा ३५ लाख ब्रोइलर चल्ला उत्पादन हुने गरेको जानकारी दिए । यी सबै चल्ला बिक्री भएका छन् । १५ प्रतिशत हाराहारी मरे पनि अरु हुर्किन्छन् । दैनिक आठ लाख ५० हजार किलो मासु उत्पादन हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
कुखुराको मूल्य नआएपछि चल्ला राख्न किसान डराएका छन् । जसका कारण चल्लाको मूल्य प्रतिगोटा ६५ बाट घटेर २० देखि ३० मा बिक्री हुने गरेको छ । भारतमा चल्लाको मूल्य बढी भएपछि यहाँका व्यवसायी भारततर्फ चल्ला पठाउन थालेका छन् । भारतमा प्रतिगोटा भारु ४५ हाराहारीमा बिक्री हुने गरेको व्यवसायी बताउछन् ।
नेपालमा झण्डै दुई महिनाअघि जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मुल्य प्रतिकिलो २७० रुपैयाँ थियो । म
पछिल्लो समय कुखुराको दानामा प्रयोग हुने मकै र भटमासको मूल्य पनि निकै बढेको छ ।
सलह किरा रुख र जमिनमा बसेर खान थाले
काठमाडौं । नेपालमा शनिबार बिहान भारतबाट सलह किरा नेपाल प्रवेश गरेको पुष्टि भएको छ । भारतसँग सीमाना जोडिएको प्रदेश २ का तीन जिल्ला बारा,...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच आज कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणबारे भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट भई लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी...
Breaking News Sushila Bishwokarma - July 31, 2020 0
बिचार डा. डिजन भट्टराई र मधुसूदन भट्टराई - April 13, 2021 0
उपमेयर कप विजेता टोलीलाई सम्मान
खेल Prem Shyangtan - March 7, 2020 0
बैतडी । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा सम्पन्न तेस्रो संस्करणको क्रिकेट प्रतियोगितामा उपाधि विजेता टोलीलाई सम्मान गरिएको छ । उपाधि हात पार्ने दशरथचन्द नगरपालिका २ देहिमाडौंको...
Editor-Picks Dhruba Lamsal - December 13, 2020 0